Posted by Tranquillus | Feb 14, 2019 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Raha manontany tena ianao izao, inona marina no atao hoe haba? Izany dia fiasa iray izay misy amin'ny fanesorana mivantana avy amin'ny karama faratampon'ny mpandoa hetra ny sandan'ny hetrany na ny fanesorana an-tery azy, toy ny fandraisana anjara ara-tsosialy ary ny General Contribution Social na CSG.
Ny foto-kevitr'ity fomba fitsaboana ara-ketra ity
Ny olana momba ny fandoavana hetra, indrindra fa ny fidiram-bola, ny fisotroan-dronono fisotroan-dronono ary ny fisotroan-dronono tsy fahampiana. Ny fampiharana dia mihenina ny latsak'izany ary ny isa dia voaisa araka ny valisoa izay nambara tamin'ny taon-dasa na ny taona N-1.
Amin'ny ankapobeny dia ireo mpandoa hetra, ny mpampiasa na ny vola fanampiana amin'ny fisotroan-dronono, izay mivarotra mivantana avy hatrany ny fandaniam-bola amin'ny mpiasany, ary manaja ny tahan'ny sehatr'asa izay efa nomen'ny lalàna Frantsay hatreto.
Ny tombontsoa amin'ny fananana hetra amin'ny mpandoa hetra sy ny fitantanam-bola
Ny hetra amin'ny fananana dia maneho tombony ho an'ny mpandoa hetra sy ny tompon'andraikitra amin'ny hetra. Raha ny marina, ny fampiharana azy dia tena tsotra sy tsy misy fanaintainana satria ny fanaovana asa an-tsitrapo dia hampihena kely ny totalin'ny salanisan'ny vola amin'ny mpandoa hetra.
Noho izany, ny farany dia tsy voatery hamaha ny fahasamihafana eo amin'ny karamany sy ny haratony mahatakatra ny karamanysatria ny fiovana amin'ny fidiram-bolany dia azo antoka fa mifandray amin'ny an'ny hetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy hikasika ny sainy ny hevitra hanemorana ny fandoavana ny haba. Hatramin'izay dia matetika no milaza fa ny fandaniana hetra dia manosika ny fankasitrahana ny hetra.
Farany, ireo mpandoa hetra dia hanohy hahazo tombontsoa amin'ny fihenan'ny hetra sy ny fandaniana hetra, saingy ireo no ho lohahevitra amin'ny fitsipika manokana.
Ireo fepetra mifandraika amin'ny fananana
Raha ireo no fitsipika sy tombontsoa azo avy amin'ny hetra takiana, dia ilaina ny manamarika fa mbola misy fepetra sasantsasany momba izany. Raha ny marina, ireo mpandoa hetra hafa dia mety takiana handoavana fiampangana fanampiny raha mbola afaka mampihatra izany fomba fanangonam-bola izany izy ireo. Mety ho ratsy ho an'ny orinasa voavaly izany, ary ho an'ny tombotsoany.
Raha tsy izany dia mety manana olana momba ny tsiambaratelo ny mpandoa hetra amin'ny fampahalalana momba ny toe-bolany ara-bola sy ara-pianakaviana, satria matetika ny fangatahana dia mitaky fampahalalana ny fampahalalam-baovao sasany.
Teo alohaAmpiasao email
manarakaAlphorm, fanofanana IT izao dia misy amin'ny Internet
Tambin-karama sy fialan-tsasatra
Fepetra momba ny fidirana sy fepetra momba ny visa sy pasipaoro ao Frantsa
Ahoana ny fiasan'ny ora fanampiny